सागर गिरी, Author at DWIT News सागर गिरी, Author at DWIT News
उनी, म र गन्तब्य
By सागर गिरी On September 27, 20162Comments
यात्रा थियो चाबहिल देखि साँखु सम्मको। कुनै काम बिशेषले जानु परेको थियो। गाडीहरु सबै प्याक थिए। कुनै गाडीको खलासीले ४० जना अटाउने गाडीमा १४० जना लाई आटउन खोज्दै थियो। गाडी कुर्दा गोडा दुखेर मर्नुझैँ […]
लेख्न गार्हो छ, तर रमाइलो पनि
By सागर गिरी On September 08, 20160Comment
२०७३ साल, वैशाख १ गतेका दिनबाट डि.डब्लु.आइ.टी. न्युज नेपाली संस्करणको श्रीगणेश गरिएको थियो। आफ्नो मातृ भाषालाई माया गर्नु पर्छ भन्ने हेतुले डि.डब्लु.आइ.टी. न्युज नेपाली संस्करणमा पनि प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको थियो। यसभन्दा पहिले डि.डब्लु.आइ.टी. […]
प्रेम पहिलो – (भाग २)
By सागर गिरी On July 14, 20162Comments
“प्रेम, पहिलो” को भाग १ पढ्नका लागि यहाँ जानुहोस : http://goo.gl/sKsERZ भोलिपल्ट…. प्रेम पत्र लेखिएको सो कागतको खोस्टोलाई खल्तीमा हालेँ। १ बजेनै म सनसाइन क्याफेमा पुगेँ। मनमा ५ रेक्टर स्केलको भूकम्प गइरहेको थियो। एक […]
By सागर गिरी On June 23, 2016 8 Comments
फोटो स्रोत: www.theodysseyonline.com यस कथाका घटना तथा पत्रहरू काल्पनिक हुन्। कसैको वास्तविक जीवन सँग मेल खाएमा, संयोग मात्र हुनेछ। कामको थकानले गर्दा ओछ्यानमा ढल्केको थिए। दिनभरिका घटनाहरू मनमा खेलाउँदै थिए। अचानक मोबाइलको […]
एक पृथक् नेपाली चलचित्र (फिल्म समीक्षा: कालो पोथी)
By सागर गिरी On June 08, 20162Comments
फोटो स्रोत: http://www.imdb.com/title/tt4991660/ भिन्स चलचित्र महोत्सवमा सर्वश्रेष्ठ फिलिमको उपाधि हात परेको नेपाली चलचित्र कालो पोथी जेठ २१ गते बाट नेपालका विभिन्न मल्टीप्लेक्स हलहरूमा प्रदर्शनमा आएको छ । मीन बहादुर भामद्वारा निर्देशित सो चलचित्रले […]
अर्चना पनेरू एक, दृष्टिकोण अनेक
By सागर गिरी On April 27, 2016 1 Comment
तपाईँ गुगलमा अर्चना पनेरू टाइप गरेर हेर्नुहोस्, उनी को हुन् र उसले के त्यस्तो काम गरेर प्रख्यात भइरहेकी छिन्, थहा पाउनु हुनेछ। पछिल्ला केही महिना देखि नेपाली समाज र युवा माझ अर्चना पनेरू निकै […]